कालिकोट जिल्लाका युवा बिजय शाही आईन्स्टाइनको भन्दा बढी दिमाग चल्ने, कस्तो अचम्म हेर्नुहोस् – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/कालिकोट जिल्लाका युवा बिजय शाही आईन्स्टाइनको भन्दा बढी दिमाग चल्ने, कस्तो अचम्म हेर्नुहोस्
कालिकोट जिल्लाका युवा बिजय शाही आईन्स्टाइनको भन्दा बढी दिमाग चल्ने, कस्तो अचम्म हेर्नुहोस्
कालीकोटका विजय शाहीले मेमोरी किङ विधामा विश्व रेकर्ड कायम गरेपछि निकै चर्चामा आएका छन्। शाहीले एक मिनेटमा अगाडि र पछाडिबाट ७० शब्द सम्झिएर भनेपछि भारतका प्रतियोगीलाई पछि पार्दै विश्व रेकर्ड राख्न सफल भएका हुन्। विजय शाहीलाई विश्व रेकर्ड कायम गरेपछि नासाले बोलाएरको छ। काठमाडौंको होटल अन्नपूर्णमा एक समारोह आयोजना गरेर शाहीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो।
यस्तो फरक प्रतिभालाई भाग्य न्याैपानेले लिएर आउनु भएको छ कि जुन भिडियो हेर्दा जो कोहि अचम्ममा पर्नु हुनेछ, यी युवा कालिकोटका १९ बर्षका बिजय शाही हुन्। बिजय शाही संसारकै धेरै सम्झिन सक्ने क्षमता भएका च्याम्पियन बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड (Champions book of World Records) प्राप्त ब्यक्ति हुन्। अझ रोचक त के भने शैक्षिक सत्रभरि कलेज धाउने, नछुटाई लेक्चर सुन्ने, ट्युसन पढ्ने र कहिल्यै कक्षा लिन मिस नगर्दासमेत पास हुन धौ-धौ पर्ने कमजोर स्मरणशक्ति भएको हाम्रो जेनरेसनका लागि एउटा युवाको यो विलक्षण प्रतिभा साँच्चै चकित पार्ने खालको छ। आखिर कसरी? यी युवाको तेज स्मरणशक्ति अदभूत नै छ।
कालीकोटका विजय शाहीमा यस्तो अदभूत कला छ, भिडियो हेर्दा जो कोहि लाई पनि अचम्म लाग्छ यो कसरी सम्भव भयो? एकचोटि पढेकै भरमा कति शब्द सम्झन सकिएला त्यो पनि छोटो समयमा नै १०/१२ वटा शब्द। बिजयलाई “आयुर्वेदिक जडिबुटी बिज्ञान” नामको एउटा किताब पढ्न लाई दिइयो उहाँले त्यो किताब आज मात्रै देखेको भनेका छन् उक्त भिडियोमा नै तर छोटो समयमा नै सबै पढेर कहिल्यै नबिर्सने गरि सम्झन सक्ने समेत भएका छन्।
विजय शाही जसलाई मेमोरी किगंका रुपमा अहिले नेपालमा मात्र होइन विश्वभर चर्चामा रहेका छन्। उनी कालिकोटका स्थानिय युवा हुन्। शाहीले मेमोरी किंगका रुपमा विश्व रेकर्ड कायम गरेका छन्। उनले एउटा निकै ठूलो किताव सरर हेर्छन् त्यसपछि त्यो किताब बन्द गरेर त्यसमा भएका शब्द उत्तिखेरै सुनाउन र लेखेर देखाउन सक्छन्। एक मिनेटमै एक सय भन्दा बढी शब्द याद गर्न सक्ने उनको खुबीकै कारण विश्व रेकर्ड कायम गर्न सफल भएका हुन्।
उहाँलाई ११०० (एघार सय) पेजको एउटा किताब दिनु भएको छ, जुन किताब बिजय साहीले 10 मिनेटमा पढेर मात्रै होइन सबै कण्ठ नै पारेका छन्। जिवन भरी बिर्सन नसक्ने दाबी नि गरेका छन्। जुन सबै कुरा “Social News Nepal” वा “Tattato Khabar” Youtube मा हेर्न सक्नु हुन्छ।
भोलि साउनको पहिलो दिन साउने संक्रान्ति : लुतो फाल्ने, तिउरी लगाउने
तुलसीपुर उपमाहानगरपालिकाका प्रशासकिय प्रमुख नागढुङ्गाबाट घुससहित पक्राउ